Regulation of Public Relations bekulokhu akubona we zikahulumeni, ukwakha uhlelo lomthetho. Kodwa ezinhlotsheni ezihlukahlukene zokuphila ngokuvamile usetha ezinye izimiso, ogama ukubulawa kuqinisekiswa hhayi esenzweni esithile, kodwa umkhuba. Futhi, ngakho-ke, kubalulekile ukwazi umqondo futhi izici umthetho, kanye nanoma yikuphi amazinga sibangelwa, ukuze lihlukaniswe ezinye izimiso. Ngenxa yalesi sicabangela izindlela ukuze yokuqonda yayo, kanye izici ezibaluleke kakhulu ukuba zithunyelwe ososayensi - jurists.
Umqondo umthetho futhi izimpawu zayo
Ukusebenzisa umqondo we "amalungelo" wenziwa amagugu eziningana. Ngokuyinhloko - iqoqo nemithetho elawula ubudlelwane esimweni. Esesibili - ithuba isinyathelo esithile ngendlela kuncike izimo wawubekela imithetho eqinile, okusho subjective kwesokudla. Inani yesithathu - yinhlangano kwezikhungo eziqondile endaweni enkulu nobudlelwano zomphakathi.
Njengoba ubona, the ezihlukahlukene nokusetshenziswa kwegama elithi "okulungile" incike esimweni ngabanye. Nokho, "kwesokudla" ngomqondo ovamile zomthetho kuhlanganisa ibanga obanzi izici noma izici, okungukuthi lokhu okulandelayo:
standard - kusho ukuthi umthetho uba umthetho kuphela uma ulawula indawo jikelele, hhayi ngqo ukuthatha isimo komuntu oyedwa;
Okusemthethweni - ukuhlanganisa imithetho ezithile zokuziphatha njengoba umthetho nenkanuko edlulele lakhe elilotshiwe ngendlela esihlinzeka isethi oyisibopho yi iziqondiso isimo;
ukungaguquguquki - ilungelo uhlelo leyakheke ngokucacile, abakhona njengento enhle jikelele, kanye ezikhethekile njengoba izimoto ukuze kuqalise ukusebenza imithetho ezivamile;
uhlobo jikelele - kusho ukuthi ilungelo Kuphoqelekile ukuyisebenzisa ukuze zonke izakhamuzi zakhe
nakanjani - ubangelwa uphawu odlule futhi kusho ukuthi ukuqinisekisa ukunamathela emthethweni, uMbuso zingasebenzisa ngokucindezelwa.
Kufinyeta izimpawu ethulwa, kungashiwo esephetha ngokuthi
Kwesokudla - lena iqoqo elisungulwe oda esisemthethweni imithetho esiyisibopho ukuziphatha elawula nobudlelwane bokuhlalisana futhi ukuqinisekisa isicelo yokuphoqelela abantu esenzweni esithile zomthetho.
Kufanele kuqashelwe ukuthi umqondo we umthetho, futhi izimpawu zaso kungenziwa siguqulwe kuye ngezimo zezwe ngalinye. Nokho, izici ethulwa ngenhla baziwa, kungakhathaliseki ukuthi incazelo oluthunyelwe izikole umthetho.
Ngaphezu kwalokho, umqondo kanye nezici amalungelo kungenziwa siguqulwe futhi, kuye ngokuthi imithetho ligcwele. Cabanga futhi bayini?
Concept futhi izici umthetho
Ngokungafani umqondo "kwesokudla" kwencazelo "umthetho" akakubekezeleli indlela esikabili. Njengomthetho, abameli ukunikeza le ncazelo elandelayo:
Umthetho - umthetho yezenhlalakahle yokuziphatha, ukukhishwa okwakukhona oyisibopho ngokuvumelana ukuhlanganisa yakhe zikahulumeni kanye nokugcwaliseka okuyinto olunikezwa komthetho izindlela.
Ngakho, njengoba lo mqondo futhi izici umthetho musa abangele emagama. Lezi zihlanganisa:
ukulawulwa ubudlelwano ezithile - njengoba umthetho, umthetho olawula imodeli ukuziphatha e eyodwa kuphela yokukhulekela ubuhlobo;
Okusemthethweni - ukuze umthetho kuyadingeka ukwenza phansi angase asetshenziswe;
ubuqiniso jikelele - Ngokungafani nezinye izindinganiso zomphakathi (isibonelo, izinqubomgomo yenkampani), umthetho liyakushunyayelwa kubopha wonke amazwe ahilelekile, okuyinto okufanele alawule;
esungula amaphethini athile ukuziphatha - okungukuthi, umthetho zihlale usungula kwesokudla, banomsebenzi, Fusion zezici zokuqala ezimbili;
akunika umlingisi isimo-imperious - uma kwenzeka imithetho ezizenzakalelayo umthetho isimo angasebenzisa ukuphoqelelwa zomthetho ukuze kuqalise ukusebenza izenzo babeka phansi ejwayelekile.
Lezi zimo zokuma ezinhlanu zingathinti nje evamile. Concept futhi izici ilungelo ngokuyisisekelo tente ngenxa ngendlela lapho ngamunye sici efakwe lolu luyasetshenziswa.
Ngaphezu kwalokho, umqondo kanye izici ilungelo ukuthi isethi abameli uMbuso is ithonywe kakhulu ukwakheka isimo sisonke. ngegunya lomthetho ukuthuthukisa futhi zamukele imithetho umthetho, okwathi kuye yimvelo yelusa intuthuko esifundeni impilo ezweni ngalinye endleleni ethile. Lokhu kusho ukuthi bayiqonda ngokucacile incazelo umthetho ngqo okuhlobene ukwakhiwa kwalesi efanele isimo umbuso, futhi yini ukubaluleka kwayo oda emhlabeni wamanje.
Tablets, powder "Antiflu": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza